Ndị ọkwọ ụgbọala | November 2019
Ịwụnye ọkwọ ụgbọala maka Epson Stylus Printer 1410
Onye ọ bụla nbipute ga-arụ ọrụ naanị na njikọta na ọkwọ ụgbọala. Software pụrụ iche bụ akụkụ dị mkpa nke ngwaọrụ dị otú ahụ. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji gbaa mbọ chọpụta otú ị ga-esi wụnye ụdị ngwanrọ ahụ na Epson Stylus Printer 1410, nke a na-akpọ Epson Stylus Photo 1410. Ị nwere ike ịrụ usoro a n'ụzọ dị iche iche.
Download ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka onye nbipute ahụ Samsung ML 1660
Ngwaọrụ ọ bụla ejikọrọ na PC chọrọ nhazi mmemme pụrụ iche maka ọrụ ha. Anyị ga-etinye isiokwu a na mkparịta ụka nke ntụziaka nwụnye software maka ụdị Samsung ML 1660. Ịwụnye ngwanrọ maka Samsung ML 1660 Ị nwere ike nweta nchọta chọrọ na ọtụtụ ụzọ.
Ịwụnye ọkwọ ụgbọ ala maka NVIDIA GeForce GTX 660 kaadị vidiyo
Kọmputa nke oge a aghaghị ịnwe kaadịadị ndị dị elu, rụọ ọrụ nke ọma na nke a pụrụ ịdabere na ya. Otú ọ dị, ọ nweghị nkwa mgbasa ozi nke onye na-emepụta ga-adị adị n'enweghị ọnụnọ nke ọkwọ ụgbọala ahụ n'ezie. Ya mere, ị ga-achọ ịma otú ị ga-esi wụnye ngwanrọ maka NVIDIA GeForce GTX 660 ihe ntanetịime vidio NVIDIA GeForce GTX 660 E nwere ọtụtụ ntinye ngwa ntinye maka NVIDIA GeForce GTX 660 kaadị vidiyo.
Chọọnụ ma budata ọkwọ ụgbọala maka HP Pavilion G7
Ọkwọ ụgbọala bụ ọkachamara ọkachamara nke na-eme ka kọmputa na kọmpụta na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi. Enweghi usoro ịkwọ ụgbọala, ihe PC nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụ ma ọlị. Ya mere, ị ga-achọ ịma otú ị ga-esi wụnye ngwanrọ a, na n'isiokwu a, anyị ga-atụle otu esi etinye ya maka HP Pavilion G7.
Ọrụ nke laptọọpụ na-adabere n'ụzọ zuru ezu na ọnụnọ nke software arụnyere. Ndị ọkwọ ụgbọala na-achọkwa maka Lenovo G780, bụ ndị na-ahụ maka arụmọrụ ya. Ndị ọrụ nke laptọọpụ nlereanya a nwere ike ibudata ma wụnye ha n'ụzọ dịgasị iche iche, mgbe ahụ, anyị lere anya nke ọ bụla n'ime ha. Ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala maka Lenovo G780 E nwere nhọrọ nbudata ọkwọ ụgbọala dị iche iche maka ngwaọrụ Lenovo's G780.
Download ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka ASSP P5KPL AM
Na nne na ngwaọrụ bụ akụkụ bụ isi maka ọrụ nke ihe niile. N'ihi nke a, ibudata ndị ọkwọ ụgbọala bụ ihe dị mkpa, ebe ọ bụ na ọ bụ naanị otu ụzọ iji hụ na arụ ọrụ nke ngwa ahụ. Na nbudata ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala Iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala, ị ga-ebu ụzọ ibudata ha.
Ịwụnye ọkwọ ụgbọala maka laptọọpụ Acer Aspire 5742G
Iji rụchaa ọrụ niile nke laptọọpụ ngwanrọ dị mkpa. N'isiokwu a, anyị ga-atụle otú ị ga-esi wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka laptọọpụ Acer Aspire 5742G. Nchọpụta nhọrọ ịkwọ ụgbọala maka Acer Aspire 5742G E nwere ọtụtụ ụzọ isi wụnye ọkwọ ụgbọala maka laptọọpụ. Ka anyi gbalịa ichota ya.
Download na wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka HP LaserJet 1300 ngwa nbipute.
Ndị ọkwọ ụgbọala bụ otu setịpụrụ faịlụ nke faịlụ iji hụ na arụmọrụ nke ngwaọrụ kwekọrọ na ngwaọrụ. Taa, anyị ga-ekwu maka ebe ịchọta na otu esi arụnye ọkwọ ụgbọ ala maka HP LaserJet 1300. Ịwụnye ngwaọrụ HP LaserJet 1300 E nwere ọtụtụ nhọrọ maka ịme usoro a.
Ọkwọ ụgbọala maka Logitech C270 igwefoto
Tupu ịmalite iji kamera weebụ, ị ga-abanye naanị na kọmpụta, mana ibudata ndị ọkwọ ụgbọala kwesịrị ekwesị. Usoro a maka Logitech C270 bu otu n'ime ụzọ anọ dị, nke ọ bụla nwere ihe algorithm dị iche iche nke omume. Ka anyị lelee nhọrọ niile ị ga-ahụ.
Onye na-akwọ ụgbọala maka HP DeskJet 2050 Printer
Ụlọ ọrụ HP na-egosi na ọ bụ ihe ngwọta na ngwụcha. Àgwà ndị a na-emetụta ngwaike ngwanrọ. Taa, anyị ga-atụle nhọrọ maka inweta software maka HP DeskJet 2050.Pịnye ndị ọkwọ ụgbọala maka HP DeskJet 2050. Ị nwere ike ịnweta ndị ọkwọ ụgbọala maka ngwaọrụ gị n'ụzọ dịgasị iche iche, ya mere, anyị na-atụ aro ịmara onye nke ọ bụla na mbụ ma họrọ nanị otu kachasị maka otu ọnọdụ.
Chọọ ma budata ọkwọ ụgbọala maka AMD Radeon HD 6670
Kaadị vidiyo bụ ngwaọrụ nke chọrọ onye ọkwọ ụgbọ ala iji arụ ọrụ nke arụmọrụ na ịrụ ọrụ kachasị elu na egwuregwu na "mmemme". Dika edeputara ohuru ohuru, ana akwadoro imelite ngwanro maka ihe ntaneti ndi ozo. Mmelite na-enwekarị ntụziaka ahụhụ, agbakwunyere atụmatụ ọhụrụ, na ntanye na Windows na mmemme ka mma.
Ebe ọkwọ ụgbọala maka Canon MG2440 Mbipụta
Iji malite ịrụ ọrụ na onye nbipute ọhụrụ, mgbe ejikọsịrị ya na PC, ọkwọ ụgbọala ga-arụ ọrụ na njedebe. Enwere ike ime nke a n'ọtụtụ ụzọ. Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka Canon MG2440 E nwere ọtụtụ ọnụọgụ dị irè iji nyere aka ibudata ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa. Ndị na-ewu ewu na ndị dị mfe bụ ndị edepụtara n'okpuru ebe a.
Download na wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka nyocha CanoScan LiDE 100
Maka njikọ na ịrụzi ọrụ nke ngwaọrụ ọ bụla, ọ dị mkpa ka ọnụnọ nke usoro ịkwọ ụgbọala kwekọrọ na ya. Enwere ike ịmaliterịrị ha na OS ma ọ bụ tinye ya n'aka onye ọrụ ahụ. Anyị ga-etinye ihe a iji dozie ọrụ nke ịchọ na ịwụnye ngwanrọ maka nyocha CanoScan LiDE 100.
Chọọ ma budata ndị ọkwọ ụgbọala maka MSI N1996
Ụfọdụ ndị na-ahụ maka ndị nne na nna MSI na-achọ ndị ọkwọ ụgbọala maka ụdị n1996, ma nke a enwebeghị ihe ọ bụla maka onye ọ bụla. N'isiokwu taa, anyị ga-eleba anya na isiokwu a, gwa gị ihe N1996 ka na-apụta, ma gwa gị otu ịhọrọ software maka motherboard gị. Download ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka MSboard motherboard. Nke bụ eziokwu bụ na nọmba N1996 abụghị ihe nlereanya nke motherboard, ọ na-egosi naanị koodu nke ndị ahịa.
Ịchọta onye ọkwọ ụgbọala maka ngwaọrụ amaghị
E nwere ọnọdụ mgbe mgbe, mgbe ịmeghachịgharịrị sistemụ arụmọrụ ma ọ bụ jikọọ ngwaọrụ ọhụrụ, kọmputa ahụ jụrụ ịgụta ngwaike ọ bụla. Enwere ike ịmatakwu ngwaọrụ ma ọ bụ akụrụngwa site n'aka onye ọrụ site na ụdị ọrụ, ma ọ gaghị arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi n'ihi enweghi ngwanrọ kwesịrị ekwesị.
Chọọ na ọkwọ ụgbọala maka Canon i-SENSYS MF4010
Ndị nwere ngwaọrụ multifunctional ma ọ bụ ndị na-ebi akwụkwọ na-ezute ọrụ na-ezighị ezi nke ngwa na kọmputa. Ọtụtụ mgbe, nsogbu ahụ bụ ọkwọ ụgbọala na-efu, nke ọnụnọ ya bụ maka ọrụ mmekọrịta nke ngwaọrụ. Canon i-SENSYS MF4010 na-achọkwa nwụnye software.
Ịwụnye ọkwọ ụgbọ ala maka Xerox Centercenter 3220
Ngwaọrụ multifunction bụ ọtụtụ ngwaọrụ agbakọta n'otu n'otu. Onye ọ bụla n'ime ha chọrọ nkwado software, yabụ na ị ga-achọ ịma otú ị ga-esi wụnye ọkwọ ụgbọala maka Xerox Workcenter 3220. Ịwụnye ọkwọ ụgbọala maka Xerox Centercenter 3220 Onye ọrụ ọ bụla nwere ọnụọgụ zuru ezu nke nhọrọ nrụnye ọkwọ ụgbọala nwere ike.
Chọọ ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka ASUS Eee PC 1001PX netbook
A na-eji ederede ederede n'ọtụtụ ikpe iji rụọ ọrụ ndị dị mkpa. Ya mere, ihe dị otú ahụ na-adịkarị ala karịa usoro nhazi nke laptọọpụ zuru ezu, na ọbụna kọmputa ndị ọzọ. Ọ dị mkpa icheta iji wụnye software maka ihe niile na ngwaọrụ nke netbook.
Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka uru HP InkJet Ink 3525
Ihe HP DeskJet Ink Advantage 3525 Ọ bụla nwere ike ibipụta na nyocha akwụkwọ, ma ọrụ ndị a niile ga-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụrụ na ndị ọkwọ ụgbọala dị na kọmputa dị. E nwere ụzọ ise ịchọta ma wụnye ha. Onye ọ bụla ga-adị irè na ọnọdụ dị iche iche, ya mere, anyị ga-enyocha nhọrọ niile, na gị, dabere na ihe ị chọrọ, họrọ nke kacha mma.
Chọta ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka NVIDIA GeForce GT 430
NVIDIA GeForce GT 430 bụ ihe ochie, ma ka dị ugbu a kaadị kaadị. N'ihi ụkọ ya, ọtụtụ ndị ọrụ na-eche ebe ịchọta na otu esi arụnye ngwanrọ dị mkpa iji rụọ arụ ọrụ. Anyị ga-akọ banyere ya na isiokwu anyị taa. Nbudata na Ịwụnye Ọkwọ ụgbọala maka GeForce GT 430 E nwere ụzọ dị iche iche maka ịwụnye ngwanrọ iji hụ na ọrụ NVIDIA kaadị mma na arụmọrụ ya kachasị mma.